Wasaaradda Caafimaadka oo deeq dawo ah gaarsiiyay qaar ka mid ah Isbitaalada Muqdisho | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Wasaaradda Caafimaadka oo deeq dawo ah gaarsiiyay qaar ka mid ah Isbitaalada...
Wasaaradda Caafimaadka oo deeq dawo ah gaarsiiyay qaar ka mid ah Isbitaalada Muqdisho
Muqdisho (SONNA) Wasaaradda Caafimaadka ee Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta Isbitaalada Muqdisho qaarkood gaarsiiyay deeq dawo ah, taasi oo ka qeyb qaadaneysa habsami u socodka howlaha caafimaadka ee Isbitaalada.
Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Caafimaadka Dr Cabdullaahi Xaashi ayaa sheegay Afar kun saddex boqol iyo shan kartoon ay tahay dawooyinka dowladda la soo gaarsiiyay, kuwaasi oo qeyb ka mid ah maanta lagu wareejiyay maamulada Isbitaalada Keysaney, Deyniile, Benaadir iyo kuwa kale, si loogu adeego bukaanada isbitaaladaasi jiifa.
“Guud ahaan waxaa noo timid 4,305 (afar kun saddex boqol iyo shan ) kartoon oo daawo ah kuwaas oo ka kala yimid Kenya, Jabuuti, Ethiopia, Qatar, US Aid, UN SOS, Puntland, Save the children, WHO iyo Zam Zam foundation” ayuu yiri Agaasimaha Guud.
Wasaaradda Caafimaadka ayaa dadaal ugu jirta sidii looga jawaabi lahaa baahiyaha ay qabaan Isbitaalada magaalada Muqdisho, kaddib markii howlo wadeenno ka tirsan Wasaaraddu ay qiimeeyn ku soo sameeyeen qaar ka mid ah Isbitaalada magaalada.
Previous articleAkhriso:-Mid kamid ah Dhacdooyinka Xanuunka Badan ee ka dhashay Xasuuqii Zoobe!
Next articleR/wasaare Khayre”Dowladda Soomaaliya waxay diyaar u tahay in Dowlad Goboleedyada ay kala shaqeysa dowrkoodi ku aadan dhismaha Dowladnimo